मुटुदेखि पेटका रोगबाट बचाउने घिरौलाको जान्नुहोस् थप फाइदाहरु.. – च्यालेन्ज नेपाल
मुटुदेखि पेटका रोगबाट बचाउने घिरौलाको जान्नुहोस् थप फाइदाहरु..
challengenepal August 27, 2020 1 min read
घिरौला हामी सबैलाई थाहा भएको र हामीले भान्सामा तरकारी बनाउदैँ खादैँ पनि आएका हौंला । यो एक ग्रीष्म वर्षा यामको लहरे तरकारी बाली हो ।
घिरौला खेताको लागी तातो (२५-३) डि.से) र ओसिलो मौसममा राम्रो सप्रने गर्दछ । घिरौला खेतीको लागी बलौटे दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ । माटोमा प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गरिक बस्तु र पी.एच.मान ५.८.-७.५. हुनु पर्दछ ।
घिरौलाका धेरै स्थानीय जातहरुको खेती गरिन्छ । उन्नत जातहरु मध्ये कान्तिपुर, नारायणी र पुसा चिल्ले बढी प्रचलित छन् ।
घिरौला तरकारीखानको लागि मात्र प्रयोग नभई यसको औषधिय महत्व पनि रहेको छ । यसलाई गर्मी समयमा हामीले तरकारी बनाएर खाँदा खेरी हाम्रो पेटमा भएको समस्यालाई हटाउन मद्धत गर्छ भने शरीरमा भएको मोटोपनलाई पनि हटाउन सहयोग गर्ने गर्छ ।
यसको सेवनले खानामा रुचि बढ्छ । यसले मुटु तथा पेटका रोगीलाई फाइदा गर्दछ ।
स्रोत नागरिक टाइम्स
यो भिडियो झन् महत्वपुर्ण छ हेर्नुहोस..
Tags: घेराउला सम्बन्धि
Previous सुत्ने बेलामा यी कुरा ख्याल नगरे खतरा हुनसक्छ पुरा पढ्नुहोस
Next सुत्नेबेलामा कस्तो कुरा खाएमा स्वास्थको लागि अमृत सम्मान हुनेछ